Imibuzo ngokushona koweqembu leziNgane Zoma | News24
Imibuzo ngokushona koweqembu leziNgane Zoma
Durban - Uzongcwatshwa ngeSonto umculi weqembu likamasikandi leZingane Zoma oshone ngoLwesihlanu ebusuku emuva kokubambeka amasonto ambalwa.
UMqapheleni Magubane waseMahlaba, eeMsinga, maphakathi yeKwaZulu-Natal ongumfowabo kaZwelenduna "Mtekhala" Magubane weqembu likaShwi noMtekhala uzofihlwa kubo eMahlaba njengoba kubikwa ukuthi ubephethwe yizinso.
UMnu Shobeni Khuzwayo abasebenze naye isikhathi eside kuleli qembu nakuba yena esegxile emsebenzini wokuba yikhansela kuWard 1 kwaNgqulu, eNquthu, enyakatho yeKwaZulu-Natal ekade enalo emculweni, kubika ILANGA.
Uthi okuningi bekwenziwa nguyena uMqapheleni okubalwa kukhona ukuphrojusa abaculi abangaphansi kwale nkampani yeZingane Zoma Music Production okubalwa kubona uKhuzani, Dlubheke, oSaziwayo, Qalindaba, Izintombi zikaMjaphane nabanye abaningi.
OLUNYE UDABA: Izingane Zoma zize neseka uZuma
"Akukho okubi okukhinjiswe uMagubane ngokugula kwakhe ngoba bengilokhu ngixhumana naye ngesikhathi esho ukuthi akaphathekile ngaze ngaxhumana nomama wakwakhe wase engitshela umkakhe ukuthi isimo sibi," kusho uKhuzwayo.
Umtekhala Magubane uthi lokhu kugula balahlekelwe kakhulu emndenini ngoba lokhu kugula akubanikezanga ithuba eliningi kube yisigubhukane.
UKhuzwayo uthi ukuhamba kukaMqapheli kushiya imibuzo emikhulu yokuthi ngabe sekuyikho yini ukuphela komsebenzi wabo womculo.